“Hooyada Foolatana Gaadhi-Dameer Ama Kaariyoono Ayaa Lagu Qaadaa Oo Ku Dhiig-baxdaa..” Dadka Ku Dhaqan Deegaan Magaaladda Hargeysa U Jira 45 Km Oo Ka Waramay Baahiyo Ay Qabaan Oo Caqabad Ku Noqday Noloshooda – somalilandtoday.com
“Hooyada Foolatana Gaadhi-Dameer Ama Kaariyoono Ayaa Lagu Qaadaa Oo Ku Dhiig-baxdaa..” Dadka Ku Dhaqan Deegaan Magaaladda Hargeysa U Jira 45 Km Oo Ka Waramay Baahiyo Ay Qabaan Oo Caqabad Ku Noqday Noloshooda
(SLT-Hargeysa)-Tuulada layidhaa Magaalo-Muumin waxay 45 kilomitir u jirtaa Caasimada Hargeysa, oo ay kaga beegan tahay koonfur-galbeed, waxanay hoos timaadaa degmada faraweyne ee gobolka Maroodi-jeex. Dadka degan degaankan ayaa lagu qiyaasaa lix boqol (600) oo qoys, waxaanay noloshoodu ku tiirsan tahay badiba xoolaha iyo beeraha. Waxaana jirta baahiyo kala duwan oo ay qabaan dadka deegaankani ku nool, taasi oo caqabad ku noqotay noloshooda.
“magaaladdani Somaliland ayay ka tirsan tahay, wax kasta oo ay Somaliland leedahayna inay lahaato dagemadani ayay ahayd, laakiin malaha.” Xukuumad kasta oo Somaliland soo martay wali waxba umay qaban deegaankani.” Sidaa ayuu Oday kamid ah dadka deegaankaasi ku dhaqan u sheegay Wariyaha telefishenka Universal, Cabdirashiid Beershiya oo hawlo shaqo ku tegay degaankaasi
Xaalada ka jirta deegaankaasi intaasi kuma koobna, waxa jirta inaanay dadka deegaankaasi helin adeeg waxbarasho oo lamid ah ka dalka intiisa kale ka jira. Caruurta deegaankanina waxa iskuul u ah geed hoostii, waxaanay ku fadhiistaan daasadaha iyo jirikaamada le tuuro. “waxaanu caruurta wax ku barnaa loox, halka aan wax ku barnana waa kaas oo waa geed hoostii, daasadaha iyo caagadahanina waxay u yihiin kuraas ardaydu ku fadhiistaan.” Ayuu yidhi macalin caruurta wax u dhiga. Hadduu roob soo da’o looxaantu halkaasbay kaga qoyaysaa, mid walibana looxii oo casharkii ka maydhmay ayuu qaadanayaa.” Ayuu sii raaciyay
Marka laga yimaado duruufaha nololeed ee ku gedaaman bulshada ku dhaqan tuulada magaalo-muumin, waxa jirta in gebi ahaanba deegaankani aanu ka jirin adeeg dawladdi qabto oo ay helaan dadkani, sida caafimaadka, waxbarshada. Hadaba Hooyadu sidee ayay u umushaa?. “haweenku way noo fooshaan, xanaano iyo dhakhtar midna ma lihin, tii Alle noo fududeeyo waanu qabnaa, tii kalena meeshii dhakhtar leh uun baanu la tagnaa, ilmahuna ama nolol buu ku tegaa ama dhexduu ku bakhtiyaaba.” Sidaasi ayay tidhi hooyo ka waramaysa dhibaatada dumarka ku qabsata xiliga foosha, waxaanay tusaale soo qaadatay dhacdo ay goob-joog u ahayd oo qabsatay ruux dumar ah oo ku foolatay deegaankaasi, “waxaan goob-joog u ahaa gabadha foolatay oo besteed noqotay oo ilmuhu dabo-keen ahaa, oo markii dambe gaadhi Ambulance ah looga keenay magaaladda Allay-baday.” Ayay tidhi “gabadh kale oo umushay oo iyaduna dhiig-baxday, hadday dhiig-baxdayna waxa loo waayay gaadhi ampulance ah oo lagu qaado, dabadeed waxaannu ku qaadnay gaadhi-dameer.” Ayay sii raacisay
Baahida ugu balaadhan ay qabaan ayaa ah waxbarashada iyo caafimaadka, waxaanay bulshada ku dhaqan magaalo-Muumin ay Xukuumadda Somaliland u direen baaq ah inay degeenkaasi ay ku nool yihiin lala soo gaadho adeegyadaasi.
Halkan hoose ka DAAWO warbixin dhammaystiran